Health Archives - Lodarya
ခြေလက် ထုံကျဉ် တာတွေကြုံလာဖြစ်လာရင် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ခြေလက် ထုံကျဉ် ရတာလဲ
ဘာကြောင့် ခြေလက် ထုံကျဉ် ရတာလဲ ခြေလက် ထုံကျဉ်ခြင်းကို လူတိုင်းနီးပါး ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ဖူးကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ဖိနပ် ကျွတ်လို့ ကျွတ်မှန်း မသိလောက်အောင်ကို ခြေထောက် ထုံကျဉ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လို လူမျိုးတွေက ခြေလက် ထုံကျဉ်လေ့ရှိလဲ ??? ခြေလက် ထုံကျဉ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်၊ […]
ရေနွေးကြမ်းသောက်တာက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေနွေးကြမ်းကို အရမ်းပူနေတဲ့အချိန်မှာသောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လည်ချောင်းနဲ့ အစာရေမြိုပြွန်အတွက် အန္တရာယ်ရှိတာပါ။ အမေရိကားအခြေစိုက် ကင်ဆာသုတေသနပညာရှင်တွေက အသက် ၄၀ ကနေ ၇၅ နှစ်ကြား လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်တတ်တဲ့ လူ ၅သောင်းကို လေ့လာမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ရေနွေးအရမ်းပူနေတုန်းမှာ သောက်တာက လည်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကို […]
သွားပိုးစားခြင်း အခေါင်းပေါက်ဖြစ်ခြင်း အတွက် ဆေးဖက်ဝင် မာလကာရွက်
မာလကာရွက်နှင့် သွားပိုးပေါက် ကလေး၊ လူကြီး မည်သည့်အရွယ်မဆို သွားကိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုက်ပြီ ဆိုရင်လဲ ညနက်သန်းခေါင် ဖြစ်တတ်ကြတာမို့ ဆေးခန်းသွားဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်ပြန်။ အလွန်ခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာတမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မပူပါနဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မာလကာပင် တပင်လောက်ရှိရုံနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ မာလကာရွက် ခပ်ရင့်ရင့် ၁၀ ရွက်လောက်ခူးလိုက်ပါ။ ရေစင်အောင်ဆေးပြီး […]
နားကိုက်ခြင်းသည် အလွန်ပင်ခံစားရရခက်သည်။ ညအချိန်တွင်ပိုမို ဖြစ်တတ်ရကာ ခံရဆိုးပါ၏ ဖြစ်ရသည်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လေဖိအားကြောင့်လည်းပါ၏။နားကိုက်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် နားပြွန်များထဲတွင် အဆီးအတားရှိနေတတ်ပြီး ပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့် နားကိုက်ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါသည်။ အသက်အရွယ်မရွေးခံစားရသည်မှန်သော်လည်း ကလေးအရွယ်တွင်ပို၍အဖြစ်များပါသည်။ သက်သာစေသောနည်းများ (၁) လူကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အား မတ်မတ်ထိုင်ရ၏ အိပ်သည့်အခါဦးခေါင်းကို အနည်းငယ် အောက်မှ ထောက်စရာတစ်ခုခုဖြင့်ထားပြီးမှ အိပ်ပါရန် နားနှင့်လေပြွန်ရောဂါအထူးကု […]
ဝက်ခြံ ၊ ဆားဝက်ခြံ နှင့် ချွေးပေါက် ကျယ်တာတွေ အတွက် အစွမ်းထက် ခရမ်းချဉ်သီး နည်းလမ်း…!
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ မြင့်မားစွာ ပါဝင်တဲ့ lycopene ဓါတ်ဟာ အရေပြားအတွက် အထူးပင်ကောင်းမွန်မှု ရှိပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် အသား အ ရေ လှချင်ရင် ခရမ်းချဉ်သီး များများ စား ပါ လို့ ပြော ကြ တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခရမ်းချဉ်သီးဟာ […]
တင်းတိတ် ၊ ပွေး ၊ မျက်နှာပေါ်က အစက်အပြောက်မှန်သမျှ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ သဘာဝဆေးနည်းလေးပါ…!
လူသိနည်းသော “အုန်းမှုတ်ခွက်ဆေးနည်းများ” အခုပြောပြမယ့် ခွက်ကလေးက အုန်းမှုတ်ခွက်လေးအကြောင်းပါ ။ ဖတ်ဘူးသမျှနဲ့ကိုယ်တွေ့ဆေးဖက်ဝင် တဲ့အုန်းမှုတ်ခွက် အကြောင်းလေးပါ ။ အညာဒေသရဲ့ ရွာတွင်းရွာပြင် ပြယုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ချစ့်စရာ့ ဓလေ့ တွေ ဟာ…ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်နေပါပြီ ။ ရေချမ်းစင်မှာ သောက်ရေခွက်အဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးပြု ကြတာကတော့ အုန်းမှုတ်ခွက် […]
သင့်ကျန်းမာရေးကို စမ်းသပ်ကြည့်ကြမယ်…။ ဒီပုံလေးတွေက သင့် အမြင်မှာ လှုပ်နေသလား ငြိမ်နေသလား
သင့်ကျန်းမာရေးကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ.။ ဒီပုံလေးတွေက သင့် အမြင် လှုပ်နေသလား ငြိမ်နေသလား သင့်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင် အရင်ဆုံးဒီပုံလေးတွေကို မြင်တဲ့ အခါ နည်းလှုပ်နေတာလား အဆက်မမြတ်လှုပ်နေတာလား ဒါမှ မဟုတ်ငြိမ်နေတာလား သေချာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီအငြိမ်ပုံလေးကို ဂျပန်နိုင်ငံသား ဦးနှောက် နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပါမောက္ခယမ်မာမိုတိုက ဖန်တီး […]